DF oo saraakiil sare xabsi ku gurtay goordhow iyo sheekada qaraxii Daalo oo Shabaab ka weynaatay - iftineducation.com
DF oo saraakiil sare xabsi ku gurtay goordhow iyo sheekada qaraxii Daalo oo Shabaab ka weynaatay
iftineducation.com – War iminka nasoo gaaray ayaa sheegaya in dowladda Soomaaliya ay xabsi ku gurtay saraakiil sare oo amni kadib markii la xaqiijiyey in qaraxii ka dhacay diyaaraddii Daalo uu ahaa qarax Miino.
Xog gaar ah oo goor dhow soo gaartay Caasimada Online ayaa sheegaysa in saraakiisha xabsiga la dhigo badankood ay yihiin kuwa ka shaqeynayey garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde, inkasta oo ay ku jiraan kuwo kale.
Saraakiisha ayaa la tuhmayaa inay fududeeyeen in waxyaabaha qarxa ee loo adeegsaday qaraxa diyaaradda ay ogolaadeen in garoonka laga dusiyo.
Sidoo kale, qaar ka mid ah saraakiisha ayaa lagu eedeynayaa inay dayaceen howshooda amni sugid, waxaana caawa soo qab qabtay xubno ka tirsan ciidamada nabad sugidda.
Xogta ay heshay Caasimada Online ayaa sidoo kale sheegeysa inuu jiro tuhun weyn oo ah in qaraxa diyaaradda uu Al-Shabaab ka weyn yahay, inkasta oo aan weli la go’aamin cidda ka dambeysay.
Ninka qaraxa fuliyey ayaa lagu warramay inuu haystay baasaboor diblomaasi ah, oo ay dowladda bixisay saddex malamood ka hor un inta qaraxa aan la fulin, taasi oo su’aalo badan dhalisay.
Howsha baaritaanka qaraxa ayaa waxaa iminka gacanta ku haya saraakiil ka tirsan FBI-da Mareykanka.
Saraakiil ka tirsan FBI-da Mareykanka oo ku biiray baaritaanka Diyaaraddii Daallo